Ike mbanye Failure-Otú Idozi ike mbanye Crash
> Resource> Draịvụ> otú ndozi Draịvụ Failure & Crash
Common mgbaàmà na njehie ozi nke ike mbanye ọdịda
• Pụrụ iche ụda si ike mbanye
• Computer nọgidere reboots
• Microsoft usoro-acha anụnụ anụnụ meziri
• Ike mbanye ma ọ bụ ngwaọrụ adịghị ghọtara ma ọ bụ ahụghị
• Ike mbanye na-adịghị formatted
• System freezes ma ọ bụ hangs
• Ọrụ usoro ahụghị
Otú ndozi ike mbanye odida & eme data mgbake?
Ọ bụrụ na kọmputa gị okosobode otu n'ime mgbaàmà n'elu, diski ike gị pụrụ ịbụ na e jiri ruru ụfọdụ software nsogbu. N'ezie, ya na ezi na ịba uru, ị nwere ike idozi ya site onwe gị na 3 nzọụkwụ: buut draịvụ ike gị, idozi nsogbu ma na-gị furu efu data azụ. Ugbu a, ka eme ya kwụpụ site nzọụkwụ na enyemaka nke Wondershare LiveBoot buut CD / USB, nke nwere ike anapụta gị ọ bụla na a pụrụ ichetụ n'echiche na kọmputa okuku na a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye.
Ugbu a, ka idozi ike mbanye odida nke ọnụ.
Step1. Mepụta a bootable Liveboot CD / DVD ma ọ bụ USB
Mgbe wụnye na-agba ọsọ Liveboot na gị PC, ị ga-esi mmalite window dị ka n'okpuru. Fanye a ide USB mbanye ma ọ bụ CD / DVD ma ọ bụ ka gị na kọmputa na pịa na green-ere ọkụ button, ekpe ọrụ ga-okokụre site usoro ihe omume.
Step2. Buut draịvụ ike gị na ọkụ disk / USB
Mgbe na-LiveBoot CD, fanye ya na kọmputa gị CD-ROM na-amalite na kọmputa gị. Mgbe usoro amalite n'idebata faịlụ, pịa F12-esi banye Ngwaọrụ buut NchNhr. họrọ USB CD-ROM Drive nhọrọ na-abanye. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nweta buut NchNhr dị ka ndị na. Kụrụ na onye mbụ buut gị na kọmputa site LiveBoot.
Step3. Ike mbanye odida data mgbake (nhọrọ)
Ike mbanye okuku nwere ike mgbe niile ime ka data ọnwụ. Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ agbake data. Na-aga "Data Recovery" menu n'elu, na mgbe ahụ kụrụ "Data Recovery" na-esi gị furu efu data azụ. Ọ pụrụ inyere gị naghachi akwụkwọ, foto, ọdịyo faịlụ, videos, ozi ịntanetị na Archive faịlụ site nile di iche iche nke nchekwa ngwaọrụ, nakwa dị ka mpụga ike mbanye jiri.
Rịba ama: Unu ịzọpụta gị data na desktọọpụ ma ọ bụ buut (X :) diski ike mbanye, n'ihi na ị bụ n'okpuru a buut gburugburu ebe obibi. Data echekwara ebe a nwere ike ọ bụghị ga-enweta n'okpuru gị onwe gị Windows.
Step4. Idozi ike mbanye ọdịda
Mgbe na-efu data azụ, pịa "Windows Iweghachite" menu n'elu. E nwere ọtụtụ kọmputa okuku ngwọta na zuru ezu nziputa nkọwa tinyere onye ọ bụla. Ahọrọ ndị kasị mma onye na-akọwa na kọmputa gị mbipụta, na mgbe ahụ na-ezu ọ na-enye gị na ntụziaka.
N'ihi na diski ike buut ọdịda, i nwere ike ịgbalị buut okuku ngwọta na mbụ, nke nwere ike inyere idozi ike mbanye jiri ruru ọjọọ sectors na ike disk, MBR jiri, buut oru mebiri emebi, wdg All ngwọta na-ewe naanị 2 nzọụkwụ, na dị nnọọ na-aga na ntụziaka na interface. Mgbe okokụre, wepụ LiveBoot CD / USB na reboot kọmputa gị, na diski ike gị bụ azụ na nkịtị.
Ịmatakwu banyere Wondershare LiveBoot buut CD / USB